ဓာတ်ပုံနှင့်ဓာတ်ပုံကင်မရာများ Gadget သတင်း
ဓာတ်ပုံကမ္ဘာလောကသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမလုံလောက်နိုင်ပါ ဓာတ်ပုံများအတွက်သီးသန့်နေရာ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ဤအမျိုးအစားတွင်မည်သည့်စာရေးသူနှင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်မဆိုအမျိုးမျိုးသောဓာတ်ပုံများ၊ အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ပုံများကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ သင်သည်များစွာသောဓါတ်ပုံများကိုနှစ်သက်လိုပါကသင့်ကိုယ်သင်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါ၊ သင်၏မျက်စိကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့ ်၍ ပျော်မွေ့ရန်ပြင်ဆင်ပါ.
အ ကျစ်လစ်ပြီး reflex ကင်မရာများ (DSLR) သူတို့ကဓာတ်ပုံလောကကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲစေပြီး၊ ငါတို့အားလုံးဟာစစ်မှန်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်၊ စျေးကွက်ထဲမှာအပြည့်စုံဆုံးကင်မရာကပေးတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကိုထိုက်တန်သောလျှပ်တစ်ပြက်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တုန့်ပြန်မှုကိုရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိမ့်မည် အမျိုးမျိုးသောရည်မှန်းချက်များ ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအတွက်ဒီဇိုင်း။ သင်သိလိုလျှင် စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးကင်မရာများ သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအရာသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိထားရန်၊ အမှန်တကယ်ရွေးချယ်မှုပြုရန် Actualidad Gadget ကကူညီလိမ့်မည်။
por Paco L ကို Gutierrez လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းသည်လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျူတာရှိသူမည်သူမဆိုလက်လှမ်းမီနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အဘိုးအဘွားဖြစ်စေ၊ ဦး လေးဖြစ်စေဖြစ်စေဆွေမျိုးအဟောင်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ သူတို့ကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်တွေ့ဆုံမည့်သူများဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်းများသည်ရိုးရာကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာများဖြင့်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့၏အရည်အသွေး၊ အရည်အသွေးကြောင့်မဟုတ်ပါ။
por Ruben Gallardo လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
မှန်ပါသည်၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာများ၏စျေးကွက်သည်စမတ်ဖုန်းများကြောင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ Is ...
Analog ဓာတ်ပုံသည် Canon မှအဓိကရိုက်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကသူတို့ရောင်းချခြင်းကိုရပ်လိုက်ပြီလို့ကြေငြာလိုက်လို့ပဲ
por Nacho Cuesta လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Panasonic သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအောင်မြင်သောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူဓာတ်ပုံလောကသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Olympus PEN E-PL9 သည်အမေရိကန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အိုလံပစ်ကင်မရာအသစ်များအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ ဒီအိုလံပစ်အကွာအဝေး ...
ကျော်ကြားသောမြောက်အမေရိကလှုပ်ရှားမှုကင်မရာများဖြစ်သော GoPro သည်၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးမော်ဒယ်ကို၎င်း၏ကက်တလောက်မှတင်ပြသည်။ ငါသိတယ်…
Panasonic Lumix TZ200, 15x optical zoom နှင့် 4K video
Panasonic သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာအမျိုးအစားကို ဆက်၍ လောင်းနေသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုတော့ဒီရက်တွေဟာ ...